ထားထား သူမ လုပ်ချင်တာတွေ အားလုံး လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ နေစိုးဝေ ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ ညိနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းလဲရရော မခံချိမခံသာ ဖြစ်ပြီး နေစိုးဝေ ကို ဖုန်းဆက် ရန်တွေ့ခဲ့ သည် ..။ သူ့အထက်အရာရှိ မြို့နယ်မွူးကိုလဲ ဖုန်းဆက်တိုင်သည် ..။ သူ့ကို မန်းလေးကို ပြန်ပြောင်းပေးဖို့ တောင်းပန် သည် ..။ ထားထားကို နေစိုးဝေနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ထမင်းဆိုင်က ကောင်မလေး ရဲ့ အဒေါ်ကိုယ်တိုင် ဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားခဲ့တာ ..။ ကိုယ့်လင် ဘာဖြစ်နေလဲ သိရဲ့လား..ကိုယ့်လင်ကို ထိန်းအုံး ..လို့ ခပ်စွာစွာ နဲ့ ပြောခဲ့သည် ..။ ထားထား သည် နေစိုးဝေ နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာတွေ ရိုးအီလာတဲ့အချိန် သူမဘက်ကစပြီး နေစိုးဝေ လိင်ဆက်ဆံချင်တိုင်း ညင်းပယ်ခဲ့ သည် ..။ ဆိုင် နဲ့ ခြံအလုပ်များလို့ အကြောင်းပြပြီး ညင်းခဲ့တာ ..။ ခြံထွက် သီးနှံတွေ..အသီးတွေ..ခြံက ကြက်..ဝက်..ဘဲ ငါးတွေ နဲ့ ဆိုင်မှာ ချက်ပြုတ်နေတော့ ခြံကို ပြေးပြေးကြည့်ရ သည် ..။
ဒီမှာ ထားထား မိုးဆွေ နဲ့ ဆုံသည် ..။ မိုးဆွေ သည် ကျောက်ဆည်ဘက်က ဖြစ် သည် ။ ခြံအလုပ်သမားလေး ဖြစ် သည် ..။ဖင်ပေါ့..ခိုင်းလို့ကောင်းသည် ဆိုပြီး ထားထား ခြံထဲသွားတိုင်း မိုးဆွေ ကို အစစ အရာရာ ခေါ်ခိုင်း သည် ။ မိုးဆွေ သည် မီးမလာတဲ့အချိန် ဆိုရင် ထားထား ရေချိုးဖို့ ခြံထဲက အိမ်လေး ထဲ ရေဆွဲဆွဲဖြည့်ပေးရ သည် ..။ ထားထား ဇက်ကျောတက်ရင်လဲ နှိပ်ပေးရ သည် ..။ သန်သန်မာမာ ဗလတောင့်တောင့် လူငယ်လေး နဲ့ အတူတူ အနေနီးစပ်တော့ ဒီကောင်လေးကို ထားထား စိတ်ဝင်စားလာ သည် ။ မိုးဆွေ နဲ့ စဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့အကြောင်း ထားထား ပြန်စဉ်းစားနေမိ သည် ..။ တကယ်တော့ မိုးဆွေ ကို ထားထားဘက်က စခဲ့တာ ပါ ..။ ထားထား လင်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်လာတာ ကြာလာတော့ ငါလုပ်ရင် ဘာမဆို ဖြစ်တာဘဲ..ငါလုပ်ချင်တာ လုပ်နိုင်သည် လို့ စိတ်ကြီးဝင် တာကြောင့်လဲ မိုးဆွေက သူ့စိတ်တွေကို နိုးကြွစေတော့..မိုးဆွေ နဲ့ ဖြစ်သွား ရ သည် ။ မိုးဆွေ သည် ရေလာဖြည့်ပေးရင် အပေါ်ပိုင်းဗလာ နဲ့ ပုဆိုးတိုတို စည်းထားတော့ သူ့ရင်အုပ် ဝမ်းဘိုက် က ကြွက်သားအဖုအထစ်တွေကိုလဲ ထားထား ရင်ခုံမိရ သည် ..။ အိမ်လေးထဲ သူမ နဲ့ မိုးဆွေဘဲ ဆိုတော့ ထားထားစိတ်တွေ ထကြွဖေါက်ပြန်လာမိ သည် ..။
လျော့ရည်းရည်းစည်းထားတဲ့ ထမိန်ရင်လျား နဲ့ ရေချိုးခါနီး အချိန် မှာ ရေချိုးခန်းထဲ မိုးဆွေ နဲ့ ရှိနေတော့..စိတ်တွေ သောင်းကျန်းလာရ သည် ..။ မိုးဆွေသည်လဲ ဖြူဖွေးတောင့်တင်းသော ဖင်ကားကားနဲ့ ထားထားနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ဖြစ်နေတော့ စိတ်ထလာပုံရ သည် ..။ သူ့ပုဆိုးရှေ့က အတန်ချောင်းကြီး ငေါငေါကြီး ထိုးထွက်နေတာ ထားထား တွေ့ရ သည် ..။ မိုးဆွေ ရေဖြည့်အပြီး နောက်ဖေးပေါက်က ပြန်ထွက်မယ် လုပ်ချိန် ထားထား မိုးဆွေလက်ကို ဖမ်းဆွဲကိုင်လိုက်သည် ..။ မိုးဆွေလဲ ဘာလုပ်ပေးရဦးမလဲ မမထား ..လို့မေးသည် ..။ ထားထားအသံတွေ တုန်နေ သည် ..။ ဒီအချိန်မှာ ထားထားအဖုတ် သည် တအားစိုနေပြီ ..။ မိုးဆွေ မသွားနဲ့အုံးကွာ..မမထား နဲ့ နေပါအုံး ..လို့ပြောသည် ..။ မိုးဆွေကို တွန်းပြီး နံရံမှာ မှီစေပြီး သူ့ကို မင်းမျက်လုံးတွေ မှိတ်ထားကွယ် လို့ ပြောလိုက်ပြီး သူ့ရင်ဘတ်ကို သူမ လက်နဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးမိ သည် ..။ မိုးဆွေ ကိုယ်အောက်ပိုင်း ကို ထားထား ကြည့်လိုက်တော့ ပုဆိုးကြားက အတန်ကြီး မတ်မတ်ထောင်နေတာတွေ့လိုက်ရ သည် ..။
“ မိုးဆွေ..” “ ဗျာ..မမထား ..” “ မင်းမှာ ရီးစား ရှိလား ..” “ ရွာမှာတုံးကတော့ ရှိတယ် ..ခုတော့ ပြတ်သွားပြီဗျ ..” “မင်း..ရီးစားနဲ့ ဘာလုပ်ဘူးလဲ ..” မိုးဆွေက နားမလည်သလို ကြောင်ကြည့်နေ သည် ..။ “မင်း..ရီးစား နဲ့ အိပ်ဘူးလား လို့မေးတာ …” “ ဟုတ်..အိပ်ဘူးတယ် ” ထားထား ပြုံးသွား သည် ..။ မိုးဆွေ ရဲ့ ဝမ်းဘိုက်သားတွေကို လက်ဖဝါးနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေရာက ဆတ်ကနဲ သူ့ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်လိုက် သည် ။ “ဟာ..မမထား …” မိုးဆွေက ပုဆိုးကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပေမဲ့ မမိတော့ ..။ ရေချိုးခန်း ကြမ်းပြင်မှာ ပုံရက်သား ကျနေပြီ ..။ မိုးဆွေရဲ့ နီညိုညို အတန်ကြီး ..လီးကြီး က မတ်နေလိုက်တာ ချက်ကို ကပ်နေ သည် ။ဒစ်ကြီး ကို မြင်ရတာ ထားထား စိတ်ထဲ ထိန်းကနဲ ကြွတက်သွားရပြီး စောက်ပတ် က စိုကနဲ ဖြစ်သွားရ သည် ..။ မိုးဆွေ အတန်ကြီး က လုံးပတ်တုတ် သည် ..။ ရှည်လဲ ရှည် သည် ။ ယောကျၤား နေစိုးဝေ ဟာထက် သာနေသည် ။ မိုးဆွေက ကြမ်းပြင်မှာ ကွင်းလုံးပုံကျနေတဲ့ ပုဆိုး ကို ကုန်းကောက်ဖို့ လုပ်ပေမဲ့ ထားထား က ခွင့်မပြုဘူး ။ မိုးဆွေ ကို တအားဖက်လိုက် သည် .။
မိုးဆွေရဲ့ကျောပြင်ကို တအားဖက်ထားလိုက် သည် ။မိုးဆွေရဲ့ အတန်ချောင်းကြီးနဲ့ ထားထား ဝမ်းဘိုက်နဲ့ တသားထဲကပ်နေသည် ..။ မိုးဆွေ စိတ်တွေ လွတ်ထွက်သွားပြီး ထားထားရဲ့ နွုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်လေတော့ ထားထားလဲ သူ့ကို တုံ့ပြန်စုတ်နမ်း..သူ့တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ် သည် ..။ ထားထားရဲ့ နဂိုထဲက ပြေကျလုလု လျော့ရဲရဲ ထမိန်သည် ပြေကျတော့ ထားထား နို့လှလှကြီးတွေ အကာအကွယ် မရှိတော့..။ မိုးဆွေ လဲ နွုတ်ခမ်းတွေကို စုတ်နေရာက ထားထား ရဲ့ တင်းမာထောင်ထနေသော နို့သီးတဖက်ကို စို့သည် ..။မိုးဆွေရဲ့ လက်တွေကလဲ ထားထား ရဲ့ စွင့်ကားတဲ့ တင်တွေကို ဆုတ်နယ် သည် ။
အသက်ရွူသံတွေ တအား ပြင်းထန်လာကြပြီး စိတ်တွေက ပြင်းထန်လွန်းနေကြလို့ ရေချိုးခန်းလေးထဲကနေ အိပ်ခန်းဆီကို ရောက်သွားချိန် ထားထားရဲ့ ထမိန်ကလဲ လမ်းခုလတ်မှာ တင် ကျကျန်ခဲ့တော့ ထားထား သည် ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်နေသည် ..။ မိုးဆွေလဲ တချိန်လုံး ကြောက်နေရပြီး ထားထား ခိုင်းသမျှကို ကုန်းလုပ်နေရသူ စြဖ် ပေမဲ့ အခုလို ထားထားကိုယ်တိုင်က စိတ်ပါပြီး သူ့ကို ခွင့်ပြုလိုက်ချိန်မှာ အရင်က ကျိတ်ပြီး ခိုးပြီး ပစ်မှားနေရတဲ့ အလွန်တောင့်တင်းတဲ့ ထားထား ကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် ကြမ်းလေပြီ ..။ ကုတင်ပေါ် ထားထားကို ပက်လက် ကန့်လန့်ဖြတ် လှဲတင်ပြီး ထားထားရဲ့ ဖြူဝင်းတဲ့ ဝတ်လစ်စားလစ် ကိုယ်အလှတွေကို အားရအောင် ကြည့်နေတော့..“ မိုးဆွေ..မမထား ရှက်တယ်ကွယ်..” လို့ ထားထားက ပြောရင်း သူမပေါင်တန်တွေကို စိလိုက်ဖို့ ကြိုးစားလေ သည် ..။
မိုးဆွေလဲ စိခွင့်မပေးဘဲ သူ့ခေါင်းကို ထိုးအပ်ခါ ထားထားရဲ့ ဖေါင်းမို့တဲ့ ဖုတ်ကြီးကို နမ်းရွုံ့တော့ သည် ..။ “ မိုးဆွေရယ် ..ဖုန်းတွေ ကံတွေ နိမ့်ကုန်ပါ့မယ်ဟာ ..”လို့ ထားထား ဟန်ဆောင် ပြောလိုက်ပေမဲ့ မိုးဆွေ လုပ်တာတွေကို ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေရ သည် ။ မိုးဆွေလဲ ထားထား အဖုတ်ကြီးကို လျာနဲ့ အပြားလိုက် ယက်ပေးသည် ..။ ထားထား ပထမ ညည်းငြူပြီး ငြိမ်နေပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မိုးဆွေ ယက်နေတဲ့အချိန် အောက်ကနေ ကော့ကော့ထည့်လေတော့ သည် ..။ မိုးဆွေလဲ ထားထားရဲ့စောက်စိကို ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ စုတ်နေပြန် သည် ။ ထားထား လဲ တအား ခံချင်နေပြီ..။ မိုးဆွေကလဲ ယက်နေတုံးဘဲ ..။
ထားထား မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ မိုးဆွေကို လုပ်ပါတော့လို့ တောင်းဆိုရ သည် .။ မိုးဆွေ..မမထားကို လုပ်ပါတော့..မမထား ..မနေနိုင်တော့ဘူး . .. ထားထား ရဲ့ အရေတွေ စိုစိုရွဲနေတဲ့ အမွေးရိပ်ထားလို့ ပြောင်တင်း ခုံးမို့နေတဲ့ အဖုတ်ကြီးထဲ မိုးဆွေ က သူ့ အတန်ကြီးကို ထိုးထည့် သည် ..။ မိုးဆွေရဲ့ လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီးသည် ထားထားရဲ့အဖုတ်ထဲ စီးတင်းတင်း ကြီး ဝင်ရောက်လာ သည် ..။ ထားထားအဖုတ်ထဲ ပြည့်ကျပ်နေသည် ..။ အင်း..တကယ့် စံချိန်မှီလီးကြီးဘဲ ..ကောင်လေး..လူသာငယ်တယ် ..ဒုတ်က အယ်တယ် … မိုးဆွေ သည် သူ့အတန်ချောင်းကြီး တဝက်ခန့် သွင်းမိနေသောအခါ ဆက်မထိုးသွင်းဘဲ ထားထားရဲ့ နိ့သီးတွေကို တဖက်ပြီးတဖက် စို့လိုက် နို့ကြီးတွေကို ဆုတ်ကိုင်ချေနယ်လိုက် လုပ်နေပြန် သည် ..။
ထားထားလဲ လိင်တန်တပ်ရက်ကြီး နဲ့ အဖုတ်အတွင်းကလဲ တအားဘဲ ယားနေတော့ ..“ မိုးဆွေ…လုပ်..လုပ်တော့..မမထားကို လုပ်တော့…”လို့ တောင်းဆိုကာ သူမဖင်ကြီးတွေကို လွုပ်မွေ့တော့ မိုးဆွေလဲ စိတ်ထဲက ဒီလောက်တဏှာကြီးတဲ့ ဆော်ကြီး..အပီဖြဲပစ်မယ် လို့ ကြုံးဝါးကာ လိင်တန်ကို ခပ်သွက်သွက် အသွင်းအထုတ် လုပ်ပါတော့ သည် ။ မိုးဆွေသည် ထားထား ကို ရေရေလည်လည် တက်ဆောင့်တော့ ထားထား တခါမှဒီလောက် မကြိုက်ဘူးခဲ့တဲ့ကာမဆက်ဆံမွု ( လိုးပေးတာ )ကို ကြုံရပြီး မိုးဆွေ လုပ်ပေးတာကို အစွဲကြီး စွဲသွားရတော့ သည် ..။ မိုးဆွေလဲထားထား ကို ထိုနေ့က လေးကြိမ်တိုင်အောင် အားရပါးရစပ်ရှက်ပေးခဲ့သလို ထားထား ခြံထဲကို လာတိုင်းလဲ ထားထားအဖုတ်ကို ကောင်းကောင်း ယက်ပေးကာ ကျေနပ်အောင် စပ်ရှက်ပေးလေ သည် ..။
ထားထား အတွက်နေစိုးဝေ ကို ပိုပိုပြီး စိမ်းလာ သည် ..။ ကောင်းကောင်း ထောင်းပေးမဲ့ မိုးဆွေလဲ ရှိနေတော့ နေစိုးဝေ ကို စိတ်မဝင်စားတော့ ..။ မိုးဆွေလဲ သူ့အလုပ်ရှင် ထားထားကို သူ့စိတ်ကြိုက် လုပ်နိုင်နေလို့ အရမ်းကျေနပ်နေသည် ..။ အရင်တုံးကလို မဟုတ်တော့ ..။အရင်တုံးက ထားထားက သူ့ကို ခိုင်းခဲ့ သည် ..။ အခု သူက ပြန်ခိုင်းလို့ရနေပြီလေ ။မမထား..ဖင်ကုန်းပေးပါလား ..ဆိုရင် ထားထား သည် သူမဖင်ကားကားကြီးတွေကို ထောင်ကုန်းပေး သည် ။ မမထား…လီးစုတ်ပေးပါ ..တောင်းဆိုရင် ထားထား က စုတ်ပေး သည် ..။ မိုးဆွေ သည် ချောမောလှပ ပြီး တောင့်လဲတောင့်..ချမ်းလဲတအားချမ်းသာသော ထားထား ကို စိတ်ကြိုက် လုပ်နိုင်လာတော့ တဆင့်တက်လာသည် ..။
ထားထားကို ဖင်ကုန်းခိုင်းကာ အနောက်က လုပ်သောအခါမှာ ထားထားရဲ့ ခရေပွင့် ဖင်ပေါက်လေးကို တွေ့မြင်ရတော့ ဖင်ပေါက်ကို ဖွင့်ချင်လာ သည် ..။ သွေးတိုးစမ်း တဲ့ အနေနဲ့ ထားထား ဖင်ပေါက်ညိုညိုလေးကို လက်မနဲ့ ပွတ်သပ်ကစား သည် ..။ ထားထားလဲ ခံလို့ကောင်းလို့ ဘာမှမငြင်းတော့ ထားထား အဖုတ်က အရေတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့ ကော်ယူကာ ဖင်ပေါက်လေးမှာ သုတ်လိမ်းပြီး ဖင်ပေါက်လေးကို ထိုးကလိ သည် ။ ထားထားကို တအားဆောင့်ဆောင့်လုပ်နေချိန်မို့ သူဖင်ပေါက်ကို ကလိနေတာ ထားထားအဖို့ သိပ် မသိသာလှဘူး ..။ လက်ချောင်းတွေ ထိုးထိုးကလိပြီး ကျင့်ပေး သည် ..။ တည ထားထား နဲ့ အရက်အတူတူသောက်ပြီး ထားထား တအားမူးလာချိန် လက်ညှိုး..လက်မ မသွင်းတော့ဘဲ သူ့လိင်တန်ကြီး ထိုးသွင်းကာ စပ်ရှက်လေ သည် ..။ထားထား သည် မိုးဆွေနဲ့ကျမှ ဖင်ခံဘူးသွားရ သည် ။ ထိုအချိန်ကစပြီး မိုးဆွေ သည် ထားထား ကို အဖုတ်တလှည့် ဖင်တလှည့် လုပ်လေ သည် ..။ ထားထား စီးပွား တအားတိုးတက် အောင်မြင်လာသောအခါ ထားထားကို လူတွေက သူတို့အကျိုးအတွက် ချဉ်းကပ်လာကြတာတွေ က အများကြီး…။ အဆိုးဆုံးက ထားထားရဲ့ ကာဆင် အဲလစ်စ် ..။ အဲလစ် နဲ့ သူ့ယောကျၤား ဖုန်းသူ က ထားထား ကို ရန်ကုန်မှာ ဆိုင်ခွဲထပ်ဖွင့်ဖို့ ဆွယ်ကြ သည် ..။
ထားထား မန်းလေးက ဆိုင်ကို ကူညီလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ရွေစင် နဲ့ ဘကြီးသုတ က ထားထား ကို အရမ်းလျောက် မလုပ်ဖို့တား သည် ..။ နေစိုးဝေကလဲ မလုပ်ပါနဲ့ လို့ပြော သည် ..။ တကယ်တော့ ရန်ကုန်မှာ ထားထား လို ဆိုင်တွေက အများကြီး ။ ဖုန်းသူတို့ လင်မယား က သူတို့ အကျိုးအတွက် ဂွင်ဖန်တာ ..။ ဖုန်းသူ သည် လင်နဲ့ ဝေးနေတဲ့ ထားထား ကို ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်နေ သည် ..။ ထားထားာကို ဆော်ချင်နေ သည် ..။ ထားထား ရဲ့ ဖင်ကားကား ထယ်ထယ်ကြီးတွေကို အမြဲခိုးကြည့်ကာ ဖြုတ်လိုက်ရရင်အီဆိမ့်နေမှာဘဲ ဆိုပြီး မှန်းနေသူ ဖြစ်တော့ ရန်ကုန်ကို သူတို့လင်မယား နဲ့ ထားထား ဆိုင်ခွဲဖွင့်ဖို့ လေ့လာမယ် ဆိုပြီး သွားကြတော့ ထားထားကို ချဉ်းကပ် ကြံစည်လေ သည် ..။ သူ့မိန်းမ အဲလစ်စ် အမျိုးတွေ နဲ့ အလုပ်များနေတဲ့အချိန် ဖုန်းသူ သည် ထားထားကို ထမင်းလိုက်ကျွေး သည် ..။ ဝိုင်..ဘီယာသောက်ကြ သည် ..။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ တည်းခိုနေတဲ့ ဟိုတယ် ပြန်ရောက်တော့ ထားထားကို အတင်း ဖက်နမ်း..အတင်း ကိုင်တွယ်လေ သည် ..။ ထားထားလဲ ဖုန်းသူ ရဲ့ အတွေ့အထိ မှာ သာယာသွားသည် ..။ ဖုန်းသူ ရဲ့ အတန်ကလဲ ပုဆိုးကြား က ထိုးထောင်နေတာ ထားထား တွေ့နေရသည် ..။ ဖုန်းသူှကို ပြန်ဖက်သိုင်းပြီး သူစုတ်တာတွေကို တုံ့ပြန် စုတ် နမ်း သည် ..။ ဖုန်းသူလဲ ထားထား အလိုတူတာကို တွေ့တာနဲ့ တဆင့်တက်တော့သည် ။
ထားထား ဖင်ကြီးတွေကို ပွတ်သပ် သည် ..။ ဖုန်းသူ သည် လက်မြန်သူမို့ အချိန် သိပ်ဆွဲမနေ ..။ ထားထားကို ကုတင်ပေါ် ပက်လက်ဖြစ်နေချိန် ထမိန်ကို လှန်တင်ကာ ပင်တီဘောင်းဘီ ကို ဆွဲချွတ် သည် ။ ထားထားရဲ့ ဖင်တုံးများက ကြီးထယ်နေတော့ ချွတ်လို့မရ ။ ထားထားက ခစ်ကနဲက ရယ်လိုက်ပြီး ဖင်ကို ကြွပေးလိုက် သည် ..။ ပင်တီဘောင်းဘီလေး ဖုန်းသူ လက်ထဲကို ပါသွားသည် ..။ ဖုန်းသူ ပြုံးကာ ပင်တီလေးကို နမ်းရွူ သည် ..။ အို…ကိုဖုန်းကလဲ..ခစ်ခစ်..ဘာလို့ ရွူနေရတာလဲ လို့ ညုတုတု နဲ့ ထားထား မေးလိုက် သည် ။ ဖုန်းသူ သည် ပင်တီလေး ရဲ့ ဂွဆုံမှာ အရေတွေ ရွဲနေတာ ကိုင်မိ ရလို့ ထားထား လဲ စိတ်လာနေတယ် ဆိုတာကို သိရ သည် ။ ထားထား ပေါင်ကြားကို ခေါင်းထိုးသွင်းကာ ထားထား အဖုတ်ကြီး ကို လျာနဲ့ စ ယက်လေတော့ သည် ..။
ထားထားလဲ ကျေနပ်စွာ ပေါင်တွေကို ကားပေးပြီး အယက်ခံလေ သည် ..။ ဖုန်းသူ သည် မိုးဆွေလိုဘဲ အယက်လဲကောင်း..အလုပ်လဲကောင်းတာ မကြာခင် ထားထား တွေ့ရတော့ သည် ..။ ဖုန်းသူ သည် ထားထား ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း စပ်ရှက် သည် ။ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး တဖန်းဖန်း နဲ့ ဆောင့် သည် ..။ ထားထား လဲ ဖုန်းသူ ကိုသဘောကျသွားသည် ..။ နောက်ရက်တွေ အဲလစ်စ် မလစ်တော့တာကြောင့် ဖုန်းသူ နဲ့ ထားထား ထပ် မလုပ် ဖြစ်တော့ ..။ မန်းလေး ပြန်ရောက်တော့ ခြံထဲလဲ မရောက်တာ ကြာလို့ ထားထား ခြံထဲ သွားလိုက် သည် ..။ ဝက်ခြံတွေ ပြန်ပြင်ဆောက်နေလို့ သူ့ကား အိမ်ရှေ့အထိ ဝင်လို့ မရဘူး ..။ အုတ်ခဲတွေ ပုံထား သည် ..။ သွပ်ပြားတွေ လဲ ပုံထားသည် ..။ ကားကို ခြံဝမှာဘဲ ရပ်ထားခဲ့ပြီး ထားထား လမ်းလျောက်ဘဲ ဝင်သွားလိုက် သည် ။ ခြံတာဝန်ခံ ဦးတင်သောင်း နဲ့ လမ်းမှာ တိုး သည် ။
ဦးတင်သောင်း ကို မိုးဆွေ ဘယ်မှာလဲ မေး သည် ..။ ဦးတင်သောင်း က မိုးဆွေ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်း..အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ လေသံတွေ ပြောင်းနေတဲ့ အကြောင်းတွေ တိုင် သည် ။ ထားထား လဲ သူနဲ့ ညိစွန်းလို့ မိုးဆွေ ဒီလို ပြောင်းလဲလာတယ် ဆိုတာ သိတာပေါ့ ..။ အင်း ..ငါကလဲ သူ့ကို နေရာပေးတာကိုး..လို့ တွေး သည် ..။ အိမ်လေးဆီကို ရောက်တဲ့အခါ ထားထား မမျှော်လင့်တာ တွေ့လိုက် ရ သည် ..။ မိုးဆွေ သည် ခြံထဲက အလုပ်သမား တယောက် ဖြစ်တဲ့ လွင်လွင်ခိုင် ကို သူမအိပ်ခန်းလေးထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ အားရပါးရကြီး စပ်ရှက်နေတာကို မြင်လိုက်ရလို့ ..။
ထားထားလဲ ယောကျၤား နဲ့ မိန်းမ စပ်ရှက်တာကို အပြာကားတွေမှာဘဲ မြင်ဘူးပြီး အပြင်မှာ မမြင်ဘူး ။ ရုတ်တရက် ကြည့်ကောင်းကောင်း နဲ့ ကြောင်ငေးကြည့်နေမိ သည် ။ မိုးဆွေ ရော လွင်လွင်ခိုင်ရော ကိုယ်လုံးတီး တွေ နဲ့ သူမကုတင်ပေါ်မှာ သဲသဲမဲမဲ ဆွဲနေကြ သည် ..။ တ ဖေါင်းဖေါင်း..တဖတ်ဖတ် အသံတွေ သောသောညံနေ သည် .. ။ မိုးဆွေ ရဲ့ လိင်တန်တုတ်တုတ်ကြီး က လွင်လွင်ခိုင်ရဲ့ အမွေးမဲမဲတွေ ဖုံးနေတဲ့ အင်္ဂါစပ်ကြီးထဲ ဆက်တိုက် သွက်သွက် ဝင်ထွက်နေ သည် ။ မိုးဆွေ ဆောင့်ဆောင့်ထည့်တိုင်း လွင်လွင်ခိုင် ရဲ့ နို့ကြီးတွေ ရမ်းခါနေ သည် ..။ “ အာ…အာ…အာ…..အကို့..အကို့….” မိုးဆွေရဲ့ အင်းကနဲ အင်းကနဲ အားယူသံကြီးက လဲ လိင်တန် နဲ့ အင်္ဂါစပ် ဝင်ထွက်တဲ့အခါ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဖွတ်ဖပ် အသံတွေ နဲ့အတူ ကြားနေရ သည် ..။
မိုးဆွေ လဲ ခါးကော့ပြီး ပြီးခြင်း လမ်းဆုံးကို ရောက်ရှိသွား ပြီးမှ ထားထားလဲ သူတို့အနားကို တိုးကပ်သွားခါ..“ ဒါက ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်နေကြတာလဲ …”လို့ အော်လိုက် သည် ..။ မိုးဆွေရော လွင်လွင်ခိုင်ရော ရုတ်တရက်မို့ လန့်သွားကြသည် ..။ “ ကဲ မိုးဆွေ..မင်းက မျက်နှာသာပေး ငါ့ကုတင်ပေါ် တက်..ဆိုသလို ငါ့အိပ်ရာပေါ် တခြားကောင်မ ခေါ်လိုးနေတာကိုးမင်း..ကို ခုဘဲ အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီ…ဂျောင်းပေတော့ …” လို့ ဒေါသတကြီး အော်လေ သည် ..။ လွင်လွင်ခိုင်.နင့်ကိုတော့ ငါ ချမ်းသာပေးလိုက်မယ် ..သွား..အလုပ်ပြန်ဝင် ..လို့ ထားထား ပြောပြန်တော့ လွင်လွင်ခိုင် လဲ သူမ အဝတ်တွေ ပြန်ဝတ်ခါ ခေါင်းလေးငုံ့ကာ အခန်းထဲက ထွက်သွား သည် ။ မိုးဆွေ က ..နဲနဲ အာခံချင်နေလို့ ထားထား လဲ ခြံအင်ချပ် ဦးတင်သောင်းကို လှမ်းအော်ခေါ် သည် ..။
“ ဦးတင်သောင်း..မိုးဆွေကို အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီ…နောင်ကို ကျမ ခြံနားတောင် မကပ်စေနဲ့..ဘယ်မလဲ..တုတ်ခဲတို့ အာဝါးတို့ ..ခေါ်…ဒီကောင့်ကို ခြံပြင်ကို မောင်းထုတ်လိုက် . .” ဦးတင်သောင်းတို့ ရောက်လာကြ သည် ..။ မိုးဆွေလဲ ဒီတော့မှ ခေါင်းငုံ့ကာ အိမ်ထဲက ထွက်သွားလေ သည် ..။ ထားထား ဖြစ်ခဲ့သမျှကို ပြန်လည် မြင်ယောင်ရင်း မိမိ အမှားတွေကို နောင်တ ရနေ သည် ..။ လင်ဖြစ်သူ ကအခု အသစ်တွေ့သွားပြီ ..။ တကယ်တမ်း သူ ကွဲမယ် ဆိုတော့လဲ ထားထား မကွဲချင် ..။ နေစိုးဝေ သည် မိမိကို တော်တော် လုပ်ကိုင်ပေးတဲ့လူ ..။ မိမိ လိုချင်တာ လုပ်ချင်တာကို အမြဲ လုပ်ပေးသူ ..။ ဖုန်းသူက တကယ်ဆိုရင် ကာဆင်ရဲ့ လင် ..။ ဖုန်းသူကို ဘာမှ အားကိုးလို့မရ ..။ တိတ်တိတ် လာလာ လိုးပေး..စောက်ပတ်ယက်ပေးတာဘဲ သူလုပ်ပေးနိုင် သည် ..။ထားထား ဆိုင်မှာ အလုပ်များနေတုံး ဖုန်းလာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဖုန်းသူ ဖြစ်နေ သည် ..။ ရွေစင် နဲ့ ဆုပြည့်တို့ ရှိနေလို့ ထားထား အတွင်းက ရုံးခန်းလေးထဲ ဝင်ပြီး ဖုန်းပြော သည် ..။
ဖုန်းသူ ရဲ့အသံက ရမက်ပြင်းနေတဲ့ အသံ ဆိုတာ သိသာ သည် ..။ မန္တလေး ပြန်ရောက်ပြီးမှ ဖုန်းသူ နဲ့ ထပ်မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး ..။ ဒါကြောင့်လဲ ဖုန်းသူ သူ့ကို ဖုန်းခေါ်တာဘဲ ဆိုတာ ထားထား သဘောပေါက် သည် ။ “ ဖုန်းသူ..ယူ့ကို ထားထား ပြောမလို့ဘဲ ..ရန်ကုန်မှာ ထားတို့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီလောက်နဲ့ဘဲ ရပ်တန်းက ရပ်လိုက်ကြရင် ကောင်းမယ် ထင်တယ် ..အဲလစ်စ် သိသွားရင်လဲတကယ့် ကို မလွယ်ဘူး ..မကောင်းဘူးကွာ ..”လို့ ထားထား ဖုန်းသူ ကို ပြောလိုက်ပေမဲ့ မရဘူး ..။ တွေ့ဖို့ဘဲ ပူဆာနေ သည် ..။ တခါထဲ…တွေ့ရင် ကျေနပ်ပြီ နဲ့ တဖွဖွ ပြောရင်း ထားထား ဘယ်လောက် ကိုယ်လုံး လှတဲ့အကြောင်း..ထားထားကို ဘယ်လောက် စွဲမက်ရတဲ့အကြောင်းတွေ ဖုန်းသူ ကြွေပြ သည် ..။ ထားထားလဲ ဆန္ဒတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ မိုးဆွေကိုလဲ မောင်းထုတ်လိုက်လို့ မရှိတော့တာ နဲ့ ဖုန်းသူ ကိုဘဲ လုပ်ခိုင်း ရင်ကောင်းမည် ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်လာပြီး ဖုန်းသူ ကို တွေ့မည် လို့ လက်ခံလိုက် သည် ..။ မြို့ပြင် က ဟိုတယ်လေးတခု မှာ ချိန်းလိုက် သည် ..။ ဖုန်းသူ သည် ထုံးစံအတိုင်း ရောက်လာတာနဲ့ ထားထား ကို အငမ်းမရ နမ်းစုတ်ကာ ထားထား ဖင်တွေကို ဆုတ်နယ်တော့တာဘဲ ..။ ထားထားလဲ သူ့ကို အလိုက်သင့် ပြန်ဖက်ပြီး ပြန်နမ်းစုတ် ရင်း စိတ်တွေ ကြွရွလာရ သည် ။ နှစ်ယောက်စလုံး အဝတ်အစားတွေ ကို ချွတ်ပစ်လိုက်ကြ သည် ..။
ဖုန်းသူ ထားထားကို နံရံမှာ လက်ထောက်ပြီး ဖင်ကိုခပ်ကော့ကော့နေစေပြီး အနောက်ကနေ လုပ် သည် ။ ထားထား ရဲ့ အနောက်ကို စွင့်ထားတဲ့ တင်သားတွေကြားကနေ ထားထားအဖုတ်ထဲကို ထိုးဆောင့် သည် ..။ ထားထား နို့တွေကို လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ညှစ်ပြီး ဆောင့်ထည့် သည် ..။ ထားထား ဒီပုံစံကို မကြိုက်လှ ။ သူ့ကို ကုတင်စောင်းမှာ ကုန်းပေးလိုက် သည် ..။ ဖုန်းသူ အားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆောင့်လုပ်တော့တာဘဲ ။ ဖုန်းသူ ဆောင့်လိုက်တိုင်း ထားထား ဖင်တုံးတွေးတုန်ခါသွားသလို ထားထား နို့တွေလဲ လွုပ်ခါနေရ သည် ..။ အသားချင်းရိုက်ခတ်သံတွေက တဖတ်ဖတ် မြည် နေပြီး ..ထားထားလဲ လက်နှစ်ဖက်ရှေ့ကျားကန်ကာ တအားအားအော်ညည်းနေရ သည် ..။ ဖုန်းသူရဲ့ ဆောင့်တာတွေ ကို ထားထား ကျေနပ် အရသာတွေ့ရတာကြောင့် ဖုန်းသူ ကို တွေ့ပြီးရင်း ထပ်တွေ့ချင်ရင်း ဖြစ်ရတာ ..။ ဖုန်းသူ သည် သူ ကြည့်ဘူးတဲ့ နိုင်ငံခြား အပြာဇာတ်ကားတွေကလို လုပ်ချင် သည် ..။
ထားထားကို ပြီးအောင် သူ လုပ်ပေးအပြီး….သူပြီးခါနီးမှာ ထားထားကို ပါးစပ်ဟခိုင်းပြီး သူ့သုတ်ရေတွေကို ထားထား ပါးစပ်ထဲကို ပန်းထည့် သည် ..။ ထားထား လု သူ့သုတ်ရေတွေ ကို မြိုချလိုက်ရ သည် ..။ ခဏ နားကြပြီး ဖုန်းသူက ဒုတိယအချီ ပြန်စ သည် ..။ ထားထား ပါးစပ်နား သူ့လိင်တန်ညိုညိုကြီးကို ထိုးကပ်ပေးသည် ..။ ထားထား က သူ့ကို မော့ကြည့်တော့..“ စုတ်ပေး..”လို့ပြော သည် ..။ ထားထားလဲ နီညိုရောင်သန်းနေတဲ့ ဒစ်ခေါင်းထိပ်ဖူးကြီးကို ငုံကာစုတ်လိုက်ရ သည် ..။ ဖုန်းသူ သည် ထားထားကို သုံးချီကောင်းကောင်း အားနဲ့ မာန်နဲ့ လုပ်ပြီးမှ လူချင်းလမ်းခွဲကာ ပြန်ခဲ့ကြ သည် ..။ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူရော ထားထားရော ကျေနပ်မွု ရသွား သည် ..။ တကယ်တော့ ထားထား ယောကျၤား နေစိုးဝေ သည်လဲ တဏှာအား ကြီးပြီး ထားထားကို အပီပြင် ဆွဲပေးသူ ဖြစ် သည် ..။ ထားထား သူ့ကို ဘာလို့ လိင်မဆက်ဆံတော့လဲ ထားထား ဖါသာလဲ မသိဘူး ..။ ရိုးအီ သွားတာလား ..။ နေ့တိုင်း ငပိရည် နဲ့ဘဲ စားရလို့ ချဉ်ပေါင်ဟင်း ပြောင်းစားချင်တာလား ..သူမဖါသာ တွေးခဲ့မိပေမဲ့ မသေချာ . .……ပြီးပါပြီ။
“ မိုးေဆြ..” “ ဗ်ာ..မမထား ..” “ မင္းမွာ ရီးစား ရွိလား ..” “ ႐ြာမွာတုံးကေတာ့ ရွိတယ္ ..ခုေတာ့ ျပတ္သြားၿပီဗ် ..” “မင္း..ရီးစားနဲ႔ ဘာလုပ္ဘူးလဲ ..” မိုးေဆြက နားမလည္သလို ေၾကာင္ၾကည့္ေန သည္ ..။ “မင္း..ရီးစား နဲ႔ အိပ္ဘူးလား လို႔ေမးတာ …” “ ဟုတ္..အိပ္ဘူးတယ္ ” ထားထား ၿပဳံးသြား သည္ ..။ မိုးေဆြ ရဲ႕ ဝမ္းဘိုက္သားေတြကို လက္ဖဝါးနဲ႔ ဖြဖြေလး ပြတ္သပ္ေပးေနရာက ဆတ္ကနဲ သူ႔ပုဆိုးကို ဆြဲခြၽတ္လိုက္ သည္ ။ “ဟာ..မမထား …” မိုးေဆြက ပုဆိုးကို လွမ္းဆြဲလိုက္ေပမဲ့ မမိေတာ့ ..။ ေရခ်ိဳးခန္း ၾကမ္းျပင္မွာ ပုံရက္သား က်ေနၿပီ ..။ မိုးေဆြရဲ႕ နီညိဳညိဳ အတန္ႀကီး ..လီးႀကီး က မတ္ေနလိုက္တာ ခ်က္ကို ကပ္ေန သည္ ။ဒစ္ႀကီး ကို ျမင္ရတာ ထားထား စိတ္ထဲ ထိန္းကနဲ ႂကြတက္သြားရၿပီး ေစာက္ပတ္ က စိုကနဲ ျဖစ္သြားရ သည္ ..။ မိုးေဆြ အတန္ႀကီး က လုံးပတ္တုတ္ သည္ ..။ ရွည္လဲ ရွည္ သည္ ။ ေယာက်ၤား ေနစိုးေဝ ဟာထက္ သာေနသည္ ။ မိုးေဆြက ၾကမ္းျပင္မွာ ကြင္းလုံးပုံက်ေနတဲ့ ပုဆိုး ကို ကုန္းေကာက္ဖို႔ လုပ္ေပမဲ့ ထားထား က ခြင့္မျပဳဘူး ။ မိုးေဆြ ကို တအားဖက္လိုက္ သည္ .။
မိုးေဆြရဲ႕ေက်ာျပင္ကို တအားဖက္ထားလိုက္ သည္ ။မိုးေဆြရဲ႕ အတန္ေခ်ာင္းႀကီးနဲ႔ ထားထား ဝမ္းဘိုက္နဲ႔ တသားထဲကပ္ေနသည္ ..။ မိုးေဆြ စိတ္ေတြ လြတ္ထြက္သြားၿပီး ထားထားရဲ႕ ႏြဳတ္ခမ္းေတြကို စုတ္ေလေတာ့ ထားထားလဲ သူ႔ကို တုံ႔ျပန္စုတ္နမ္း..သူ႔တင္ပါးေတြကို ဖ်စ္ညႇစ္ သည္ ..။ ထားထားရဲ႕ နဂိုထဲက ေျပက်လုလု ေလ်ာ့ရဲရဲ ထမိန္သည္ ေျပက်ေတာ့ ထားထား ႏို႔လွလွႀကီးေတြ အကာအကြယ္ မရွိေတာ့..။ မိုးေဆြ လဲ ႏြဳတ္ခမ္းေတြကို စုတ္ေနရာက ထားထား ရဲ႕ တင္းမာေထာင္ထေနေသာ ႏို႔သီးတဖက္ကို စို႔သည္ ..။မိုးေဆြရဲ႕ လက္ေတြကလဲ ထားထား ရဲ႕ စြင့္ကားတဲ့ တင္ေတြကို ဆုတ္နယ္ သည္ ။
အသက္႐ြဴသံေတြ တအား ျပင္းထန္လာၾကၿပီး စိတ္ေတြက ျပင္းထန္လြန္းေနၾကလို႔ ေရခ်ိဳးခန္းေလးထဲကေန အိပ္ခန္းဆီကို ေရာက္သြားခ်ိန္ ထားထားရဲ႕ ထမိန္ကလဲ လမ္းခုလတ္မွာ တင္ က်က်န္ခဲ့ေတာ့ ထားထား သည္ ကိုယ္လုံးတီး ျဖစ္ေနသည္ ..။ မိုးေဆြလဲ တခ်ိန္လုံး ေၾကာက္ေနရၿပီး ထားထား ခိုင္းသမွ်ကို ကုန္းလုပ္ေနရသူ ျစဖ္ ေပမဲ့ အခုလို ထားထားကိုယ္တိုင္က စိတ္ပါၿပီး သူ႔ကို ခြင့္ျပဳလိုက္ခ်ိန္မွာ အရင္က က်ိတ္ၿပီး ခိုးၿပီး ပစ္မွားေနရတဲ့ အလြန္ေတာင့္တင္းတဲ့ ထားထား ကို စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ၾကမ္းေလၿပီ ..။ ကုတင္ေပၚ ထားထားကို ပက္လက္ ကန႔္လန႔္ျဖတ္ လွဲတင္ၿပီး ထားထားရဲ႕ ျဖဴဝင္းတဲ့ ဝတ္လစ္စားလစ္ ကိုယ္အလွေတြကို အားရေအာင္ ၾကည့္ေနေတာ့..“ မိုးေဆြ..မမထား ရွက္တယ္ကြယ္..” လို႔ ထားထားက ေျပာရင္း သူမေပါင္တန္ေတြကို စိလိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေလ သည္ ..။
မိုးေဆြလဲ စိခြင့္မေပးဘဲ သူ႔ေခါင္းကို ထိုးအပ္ခါ ထားထားရဲ႕ ေဖါင္းမို႔တဲ့ ဖုတ္ႀကီးကို နမ္း႐ြဳံ႕ေတာ့ သည္ ..။ “ မိုးေဆြရယ္ ..ဖုန္းေတြ ကံေတြ နိမ့္ကုန္ပါ့မယ္ဟာ ..”လို႔ ထားထား ဟန္ေဆာင္ ေျပာလိုက္ေပမဲ့ မိုးေဆြ လုပ္တာေတြကို ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ေနရ သည္ ။ မိုးေဆြလဲ ထားထား အဖုတ္ႀကီးကို လ်ာနဲ႔ အျပားလိုက္ ယက္ေပးသည္ ..။ ထားထား ပထမ ညည္းျငဴၿပီး ၿငိမ္ေနေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ မိုးေဆြ ယက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေအာက္ကေန ေကာ့ေကာ့ထည့္ေလေတာ့ သည္ ..။ မိုးေဆြလဲ ထားထားရဲ႕ေစာက္စိကို ႁပြတ္ကနဲ ႁပြတ္ကနဲ စုတ္ေနျပန္ သည္ ။ ထားထား လဲ တအား ခံခ်င္ေနၿပီ..။ မိုးေဆြကလဲ ယက္ေနတုံးဘဲ ..။
ထားထား မေအာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ မိုးေဆြကို လုပ္ပါေတာ့လို႔ ေတာင္းဆိုရ သည္ .။ မိုးေဆြ..မမထားကို လုပ္ပါေတာ့..မမထား ..မေနႏိုင္ေတာ့ဘူး . .. ထားထား ရဲ႕ အေရေတြ စိုစို႐ြဲေနတဲ့ အေမြးရိပ္ထားလို႔ ေျပာင္တင္း ခုံးမို႔ေနတဲ့ အဖုတ္ႀကီးထဲ မိုးေဆြ က သူ႔ အတန္ႀကီးကို ထိုးထည့္ သည္ ..။ မိုးေဆြရဲ႕ လိင္တန္တုတ္တုတ္ႀကီးသည္ ထားထားရဲ႕အဖုတ္ထဲ စီးတင္းတင္း ႀကီး ဝင္ေရာက္လာ သည္ ..။ ထားထားအဖုတ္ထဲ ျပည့္က်ပ္ေနသည္ ..။ အင္း..တကယ့္ စံခ်ိန္မွီလီးႀကီးဘဲ ..ေကာင္ေလး..လူသာငယ္တယ္ ..ဒုတ္က အယ္တယ္ … မိုးေဆြ သည္ သူ႔အတန္ေခ်ာင္းႀကီး တဝက္ခန႔္ သြင္းမိေနေသာအခါ ဆက္မထိုးသြင္းဘဲ ထားထားရဲ႕ နိ႔သီးေတြကို တဖက္ၿပီးတဖက္ စို႔လိုက္ ႏို႔ႀကီးေတြကို ဆုတ္ကိုင္ေခ်နယ္လိုက္ လုပ္ေနျပန္ သည္ ..။
ထားထားလဲ လိင္တန္တပ္ရက္ႀကီး နဲ႔ အဖုတ္အတြင္းကလဲ တအားဘဲ ယားေနေတာ့ ..“ မိုးေဆြ…လုပ္..လုပ္ေတာ့..မမထားကို လုပ္ေတာ့…”လို႔ ေတာင္းဆိုကာ သူမဖင္ႀကီးေတြကို လြဳပ္ေမြ႕ေတာ့ မိုးေဆြလဲ စိတ္ထဲက ဒီေလာက္တဏွာႀကီးတဲ့ ေဆာ္ႀကီး..အပီၿဖဲပစ္မယ္ လို႔ ႀကဳံးဝါးကာ လိင္တန္ကို ခပ္သြက္သြက္ အသြင္းအထုတ္ လုပ္ပါေတာ့ သည္ ။ မိုးေဆြသည္ ထားထား ကို ေရေရလည္လည္ တက္ေဆာင့္ေတာ့ ထားထား တခါမွဒီေလာက္ မႀကိဳက္ဘူးခဲ့တဲ့ကာမဆက္ဆံမြဳ ( လိုးေပးတာ )ကို ႀကဳံရၿပီး မိုးေဆြ လုပ္ေပးတာကို အစြဲႀကီး စြဲသြားရေတာ့ သည္ ..။ မိုးေဆြလဲထားထား ကို ထိုေန႔က ေလးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ အားရပါးရစပ္ရွက္ေပးခဲ့သလို ထားထား ၿခံထဲကို လာတိုင္းလဲ ထားထားအဖုတ္ကို ေကာင္းေကာင္း ယက္ေပးကာ ေက်နပ္ေအာင္ စပ္ရွက္ေပးေလ သည္ ..။
ထားထား အတြက္ေနစိုးေဝ ကို ပိုပိုၿပီး စိမ္းလာ သည္ ..။ ေကာင္းေကာင္း ေထာင္းေပးမဲ့ မိုးေဆြလဲ ရွိေနေတာ့ ေနစိုးေဝ ကို စိတ္မဝင္စားေတာ့ ..။ မိုးေဆြလဲ သူ႔အလုပ္ရွင္ ထားထားကို သူ႔စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ႏိုင္ေနလို႔ အရမ္းေက်နပ္ေနသည္ ..။ အရင္တုံးကလို မဟုတ္ေတာ့ ..။အရင္တုံးက ထားထားက သူ႔ကို ခိုင္းခဲ့ သည္ ..။ အခု သူက ျပန္ခိုင္းလို႔ရေနၿပီေလ ။မမထား..ဖင္ကုန္းေပးပါလား ..ဆိုရင္ ထားထား သည္ သူမဖင္ကားကားႀကီးေတြကို ေထာင္ကုန္းေပး သည္ ။ မမထား…လီးစုတ္ေပးပါ ..ေတာင္းဆိုရင္ ထားထား က စုတ္ေပး သည္ ..။ မိုးေဆြ သည္ ေခ်ာေမာလွပ ၿပီး ေတာင့္လဲေတာင့္..ခ်မ္းလဲတအားခ်မ္းသာေသာ ထားထား ကို စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ႏိုင္လာေတာ့ တဆင့္တက္လာသည္ ..။
ထားထား မန္းေလးက ဆိုင္ကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ေ႐ြစင္ နဲ႔ ဘႀကီးသုတ က ထားထား ကို အရမ္းေလ်ာက္ မလုပ္ဖို႔တား သည္ ..။ ေနစိုးေဝကလဲ မလုပ္ပါနဲ႔ လို႔ေျပာ သည္ ..။ တကယ္ေတာ့ ရန္ကုန္မွာ ထားထား လို ဆိုင္ေတြက အမ်ားႀကီး ။ ဖုန္းသူတို႔ လင္မယား က သူတို႔ အက်ိဳးအတြက္ ဂြင္ဖန္တာ ..။ ဖုန္းသူ သည္ လင္နဲ႔ ေဝးေနတဲ့ ထားထား ကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ေတြ ေဖါက္ျပန္ေန သည္ ..။ ထားထားာကို ေဆာ္ခ်င္ေန သည္ ..။ ထားထား ရဲ႕ ဖင္ကားကား ထယ္ထယ္ႀကီးေတြကို အၿမဲခိုးၾကည့္ကာ ျဖဳတ္လိုက္ရရင္အီဆိမ့္ေနမွာဘဲ ဆိုၿပီး မွန္းေနသူ ျဖစ္ေတာ့ ရန္ကုန္ကို သူတို႔လင္မယား နဲ႔ ထားထား ဆိုင္ခြဲဖြင့္ဖို႔ ေလ့လာမယ္ ဆိုၿပီး သြားၾကေတာ့ ထားထားကို ခ်ဥ္းကပ္ ႀကံစည္ေလ သည္ ..။ သူ႔မိန္းမ အဲလစ္စ္ အမ်ိဳးေတြ နဲ႔ အလုပ္မ်ားေနတဲ့အခ်ိန္ ဖုန္းသူ သည္ ထားထားကို ထမင္းလိုက္ေကြၽး သည္ ..။ ဝိုင္..ဘီယာေသာက္ၾက သည္ ..။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူတို႔ တည္းခိုေနတဲ့ ဟိုတယ္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ ထားထားကို အတင္း ဖက္နမ္း..အတင္း ကိုင္တြယ္ေလ သည္ ..။ ထားထားလဲ ဖုန္းသူ ရဲ႕ အေတြ႕အထိ မွာ သာယာသြားသည္ ..။ ဖုန္းသူ ရဲ႕ အတန္ကလဲ ပုဆိုးၾကား က ထိုးေထာင္ေနတာ ထားထား ေတြ႕ေနရသည္ ..။ ဖုန္းသူွကို ျပန္ဖက္သိုင္းၿပီး သူစုတ္တာေတြကို တုံ႔ျပန္ စုတ္ နမ္း သည္ ..။ ဖုန္းသူလဲ ထားထား အလိုတူတာကို ေတြ႕တာနဲ႔ တဆင့္တက္ေတာ့သည္ ။
ထားထား ဖင္ႀကီးေတြကို ပြတ္သပ္ သည္ ..။ ဖုန္းသူ သည္ လက္ျမန္သူမို႔ အခ်ိန္ သိပ္ဆြဲမေန ..။ ထားထားကို ကုတင္ေပၚ ပက္လက္ျဖစ္ေနခ်ိန္ ထမိန္ကို လွန္တင္ကာ ပင္တီေဘာင္းဘီ ကို ဆြဲခြၽတ္ သည္ ။ ထားထားရဲ႕ ဖင္တုံးမ်ားက ႀကီးထယ္ေနေတာ့ ခြၽတ္လို႔မရ ။ ထားထားက ခစ္ကနဲက ရယ္လိုက္ၿပီး ဖင္ကို ႂကြေပးလိုက္ သည္ ..။ ပင္တီေဘာင္းဘီေလး ဖုန္းသူ လက္ထဲကို ပါသြားသည္ ..။ ဖုန္းသူ ၿပဳံးကာ ပင္တီေလးကို နမ္း႐ြဴ သည္ ..။ အို…ကိုဖုန္းကလဲ..ခစ္ခစ္..ဘာလို႔ ႐ြဴေနရတာလဲ လို႔ ညဳတုတု နဲ႔ ထားထား ေမးလိုက္ သည္ ။ ဖုန္းသူ သည္ ပင္တီေလး ရဲ႕ ဂြဆုံမွာ အေရေတြ ႐ြဲေနတာ ကိုင္မိ ရလို႔ ထားထား လဲ စိတ္လာေနတယ္ ဆိုတာကို သိရ သည္ ။ ထားထား ေပါင္ၾကားကို ေခါင္းထိုးသြင္းကာ ထားထား အဖုတ္ႀကီး ကို လ်ာနဲ႔ စ ယက္ေလေတာ့ သည္ ..။
ထားထားလဲ ေက်နပ္စြာ ေပါင္ေတြကို ကားေပးၿပီး အယက္ခံေလ သည္ ..။ ဖုန္းသူ သည္ မိုးေဆြလိုဘဲ အယက္လဲေကာင္း..အလုပ္လဲေကာင္းတာ မၾကာခင္ ထားထား ေတြ႕ရေတာ့ သည္ ..။ ဖုန္းသူ သည္ ထားထား ကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း စပ္ရွက္ သည္ ။ဖင္ကုန္းခိုင္းၿပီး တဖန္းဖန္း နဲ႔ ေဆာင့္ သည္ ..။ ထားထား လဲ ဖုန္းသူ ကိုသေဘာက်သြားသည္ ..။ ေနာက္ရက္ေတြ အဲလစ္စ္ မလစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ ဖုန္းသူ နဲ႔ ထားထား ထပ္ မလုပ္ ျဖစ္ေတာ့ ..။ မန္းေလး ျပန္ေရာက္ေတာ့ ၿခံထဲလဲ မေရာက္တာ ၾကာလို႔ ထားထား ၿခံထဲ သြားလိုက္ သည္ ..။ ဝက္ၿခံေတြ ျပန္ျပင္ေဆာက္ေနလို႔ သူ႔ကား အိမ္ေရွ႕အထိ ဝင္လို႔ မရဘူး ..။ အုတ္ခဲေတြ ပုံထား သည္ ..။ သြပ္ျပားေတြ လဲ ပုံထားသည္ ..။ ကားကို ၿခံဝမွာဘဲ ရပ္ထားခဲ့ၿပီး ထားထား လမ္းေလ်ာက္ဘဲ ဝင္သြားလိုက္ သည္ ။ ၿခံတာဝန္ခံ ဦးတင္ေသာင္း နဲ႔ လမ္းမွာ တိုး သည္ ။
ဦးတင္ေသာင္း ကို မိုးေဆြ ဘယ္မွာလဲ ေမး သည္ ..။ ဦးတင္ေသာင္း က မိုးေဆြ အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲေနတဲ့အေၾကာင္း..အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေလသံေတြ ေျပာင္းေနတဲ့ အေၾကာင္းေတြ တိုင္ သည္ ။ ထားထား လဲ သူနဲ႔ ညိစြန္းလို႔ မိုးေဆြ ဒီလို ေျပာင္းလဲလာတယ္ ဆိုတာ သိတာေပါ့ ..။ အင္း ..ငါကလဲ သူ႔ကို ေနရာေပးတာကိုး..လို႔ ေတြး သည္ ..။ အိမ္ေလးဆီကို ေရာက္တဲ့အခါ ထားထား မေမွ်ာ္လင့္တာ ေတြ႕လိုက္ ရ သည္ ..။ မိုးေဆြ သည္ ၿခံထဲက အလုပ္သမား တေယာက္ ျဖစ္တဲ့ လြင္လြင္ခိုင္ ကို သူမအိပ္ခန္းေလးထဲက ကုတင္ေပၚမွာ အားရပါးရႀကီး စပ္ရွက္ေနတာကို ျမင္လိုက္ရလို႔ ..။
ထားထားလဲ ေယာက်ၤား နဲ႔ မိန္းမ စပ္ရွက္တာကို အျပာကားေတြမွာဘဲ ျမင္ဘူးၿပီး အျပင္မွာ မျမင္ဘူး ။ ႐ုတ္တရက္ ၾကည့္ေကာင္းေကာင္း နဲ႔ ေၾကာင္ေငးၾကည့္ေနမိ သည္ ။ မိုးေဆြ ေရာ လြင္လြင္ခိုင္ေရာ ကိုယ္လုံးတီး ေတြ နဲ႔ သူမကုတင္ေပၚမွာ သဲသဲမဲမဲ ဆြဲေနၾက သည္ ..။ တ ေဖါင္းေဖါင္း..တဖတ္ဖတ္ အသံေတြ ေသာေသာညံေန သည္ .. ။ မိုးေဆြ ရဲ႕ လိင္တန္တုတ္တုတ္ႀကီး က လြင္လြင္ခိုင္ရဲ႕ အေမြးမဲမဲေတြ ဖုံးေနတဲ့ အဂၤါစပ္ႀကီးထဲ ဆက္တိုက္ သြက္သြက္ ဝင္ထြက္ေန သည္ ။ မိုးေဆြ ေဆာင့္ေဆာင့္ထည့္တိုင္း လြင္လြင္ခိုင္ ရဲ႕ ႏို႔ႀကီးေတြ ရမ္းခါေန သည္ ..။ “ အာ…အာ…အာ…..အကို႔..အကို႔….” မိုးေဆြရဲ႕ အင္းကနဲ အင္းကနဲ အားယူသံႀကီးက လဲ လိင္တန္ နဲ႔ အဂၤါစပ္ ဝင္ထြက္တဲ့အခါ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ဖြတ္ဖပ္ အသံေတြ နဲ႔အတူ ၾကားေနရ သည္ ..။
“ ဦးတင္ေသာင္း..မိုးေဆြကို အလုပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီ…ေနာင္ကို က်မ ၿခံနားေတာင္ မကပ္ေစနဲ႔..ဘယ္မလဲ..တုတ္ခဲတို႔ အာဝါးတို႔ ..ေခၚ…ဒီေကာင့္ကို ၿခံျပင္ကို ေမာင္းထုတ္လိုက္ . .” ဦးတင္ေသာင္းတို႔ ေရာက္လာၾက သည္ ..။ မိုးေဆြလဲ ဒီေတာ့မွ ေခါင္းငုံ႔ကာ အိမ္ထဲက ထြက္သြားေလ သည္ ..။ ထားထား ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကို ျပန္လည္ ျမင္ေယာင္ရင္း မိမိ အမွားေတြကို ေနာင္တ ရေန သည္ ..။ လင္ျဖစ္သူ ကအခု အသစ္ေတြ႕သြားၿပီ ..။ တကယ္တမ္း သူ ကြဲမယ္ ဆိုေတာ့လဲ ထားထား မကြဲခ်င္ ..။ ေနစိုးေဝ သည္ မိမိကို ေတာ္ေတာ္ လုပ္ကိုင္ေပးတဲ့လူ ..။ မိမိ လိုခ်င္တာ လုပ္ခ်င္တာကို အၿမဲ လုပ္ေပးသူ ..။ ဖုန္းသူက တကယ္ဆိုရင္ ကာဆင္ရဲ႕ လင္ ..။ ဖုန္းသူကို ဘာမွ အားကိုးလို႔မရ ..။ တိတ္တိတ္ လာလာ လိုးေပး..ေစာက္ပတ္ယက္ေပးတာဘဲ သူလုပ္ေပးႏိုင္ သည္ ..။ထားထား ဆိုင္မွာ အလုပ္မ်ားေနတုံး ဖုန္းလာလို႔ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဖုန္းသူ ျဖစ္ေန သည္ ..။ ေ႐ြစင္ နဲ႔ ဆုျပည့္တို႔ ရွိေနလို႔ ထားထား အတြင္းက ႐ုံးခန္းေလးထဲ ဝင္ၿပီး ဖုန္းေျပာ သည္ ..။